के–के हुँदैछ शेर्पा संघमा ? (फोटोफिचर)
२०७६ माघ २१, मंगलबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । नेपाल शेर्पा संघको छैठौं महाधिवेशनबाट गेल्जे लामा शेर्पाको अध्यक्षतामा कार्यसमिति गठन पश्चात् आन्तरिक व्यवस्थापन लगायतका कार्यले तिब्रता पाएकोछ । पौष ७ गते पहिलो र माघ ४ गते दोस्रो पटक केन्द्रीय समितिको बैठक वसेर विभिन्न निर्णय गर्दै कार्यअघि बढाएको हो ।
संघले प्रारम्भिक चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनको कार्यलाई तिब्रता दिएको थियो । जसानुसार कार्यालयमा कर्मचारी नियूक्ति, फर्निचर, रंगरोगन लगायतको काम सकिएको छ । अहिले कार्यालय सहायक, सुरक्षागार्डको नियूक्ति भएर काम गरिरहेका छन् ।
उपाध्यक्ष तेन्जी शेर्पाको नेतृत्वमा गठीत कार्यालय व्यवस्थापन समितिले भवनको तेस्रो तल्ला अर्थात (जिपछिरिङ लामा फलोर) मा अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, भान्साकोठा, कार्यालय प्रशासन कक्षको व्यवस्थापन गरेको छ । सचिवालयको बैठकपनि सोही तल्लामा हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै, डेफोडियल फलोरमा केन्द्रीय समितिको बैठक वस्ने कक्षको व्यवस्थापन गरेका छन् । उक्त दोस्रो तल्लाको भित्ताहरुमा विभिन्न आकृतिका चित्रहरु लेखिएको छ । शेर्पा संस्कृति झल्कने चित्रहरुले हललाई आकर्षक बनाएको छ । त्यस्तै, पहिलो तल्लामा सभाहल धमाधम निर्माण भइरहेको छ । उक्त सभाहलमा पासाङ ल्हमु शेर्पा, तेन्जीङ नोर्बु शेर्पा, शेर्पा जातिको अन्तिम राजा, शेर्पा संस्कृतिमा आधारित श्याब्रु नृत्यु, शेर्पा प्रदेशका नक्साहरु लेखिएका छन् ।
भवनको भुँई तल्लामा आबद्ध संस्थाहरुको कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल शेर्पा विद्यार्थी संघ, शेर्पा कलाकार संघ लगायतले कार्यालय सरेका छन् । त्यस्तै, अन्य संस्थाहरुको पनि छिट्टै कार्यालय व्यवस्थापन हुने संघसंस्था समन्वय विभागका प्रमुख च्येङा शेर्पाले जानकारी दिए ।
कार्यालय प्रवेशद्धारादेखि नै विभिन्न कलात्मक चित्रहरुले संघको भवनमा प्रवेश गर्दा शेर्पा समुदायको प्रष्ट चित्र झल्किने गरी कार्यअघि बढीरहेको अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी बताए ।
माघ ४ गतेको बैठकले गठीत विभागहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको कार्यहरु अघि बढाउन क्रियाशिलता देखाउन थालेका छन् । भाषा विभागले प्रत्येक शनिबार शेर्पा भाषा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यअघि बढाएको प्रमुख किशोर शेर्पाले जानकारी दिए । त्यस्तै, लोकसेवा आयोगका तयारी कक्षाहरु सञ्चालनका लागि तयारी भइरहेको राज्य व्यवस्था तथा स्वरोजगार विभागका प्रमुख आङ निमा शेर्पाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, संघले ल्होसारको अवसर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ल्होसार मनाउने विधिको बारेमा शेर्पा समुदायको सघन वसोवास रहेको क्षेत्रमा सूचना प्रवाह गरी ल्होसारका बारेमा प्रचारप्रसार गर्ने, शुभकामना आदनप्रदानका विभिन्न विधिहरु अबलम्बन गर्ने समेत निर्णय गरेको महासचिव लाक्पा शेर्पाले जानकारी दिए ।
तस्वीरहरुः लाक्पा जी शेर्पा/शेर्पाखबर
शेरी शेर्पाका अन्य लेख तथा रचनाहरु
जाङमु शेर्पाको मिस मंगोल यात्रा
शेर्पा संघको नयाँ नेतृत्वले सक्रिया देखायो
शेर्पा संघको विधानमा त्रुटी ‘कतै ३३ प्रतिशत नै पुग्दैनन महिला !’
उन्जेलामा स्मृती लोसार कप २०७६ ‘महोत्सवको रुपमा हुने’
शेर्पा संघको विधान संशोधन गर्न मागसहित ज्ञापन पत्र (ज्ञापन पत्र र संशोधनसहित)
सगरमाथा आधारशिविरमा १७ जनामा कोरोना पुष्टि !
चोरीको स्कारपियो सशस्त्र प्रहरी हवल्दारको निवासमा
‘लोकसेवा र जनगणना’ प्रभावकारी बनाउन शेर्पा संघको परिपत्र
एउटा बिरुवाको मूल्य ३५ हजार रुपैयाँ, के फल्छ यसमा, ‘सुन कि सुन्तला’ ?
किवि खेतीबाट चर्चामा ‘पासाङ तेन्जी शेर्पा’
नेपाल शेर्पा संघको छैठौ राष्ट्रिय महधिबेशन सम्बन्धी जरुरी सुचना !